Tartanka ayaa loo qabtay Ardayda dugsiyada sare ee magaalada Gaalkacyo, taas oo ah markii ugu horeeysa oo tartan ceynkaan oo kala ah lagu tababarayo ardayda matalaaysa iskuulada si loo helo arday matasha magacyada iskuulada.
Ardaydaan ayaa la rajeynayaa in Mustaqbalka ay qeeyb weeyn ka qaataan tartamada soo socda oo ceynkaan oo kale ah, waana markii ugu horeeysay oo magaalada Gaalkacto laga hirgaliyo ciyaartoy Kubada Koloyga tan iyo intii burburka dalku uu kujiray mudo 25-sano lago joogo.
Furitaanka ayaa waxa ka hadalay gudoomiyaha kubada Koloyga Cabdixakin Cabdiraxman oo ka war bixiyay furitaanka iskuulada loo bilaabay kubada baasketka in ay tahay guul aad u wanasgan oo tariiq ah waana bilaawnay waana wadayna ayuu yiri gudoomiyaha.
Sidoo kale waxaa isna goobtii ka hadlay xoghayaha kubada baasketka Cabdiqani Carabey oo ku tilmaamay tababarkaan mid aad muhii u ah, isla markaana dib u soo nooleeynaya kubada Koloyga oo waligeedba caan ay ku ahyed magalada Gaalkacyo ee gobolka gobolka mudug.
Dhinaca kale Carabey ayaa sheegay in iskuulada ay aad u badan yihin loona baahan yahay in dhamaan laga hirgaliyo iskuulada si dhalinyarada uga badbaadan tahriibta daraagiska iyo wiix dhib ku keeni kara mustaqbalkooda, asagoona sidoo kale mahad celinayay halyeeyda Soomaaliyeed oo ay ka mid yahiin Mohmaed Madoowe Abdirizak Marayare Macalin Cali aamiin oo qeeb ween ka qaatay garoonka laga furay tababarka dhalinyarada.
Xog. hayaha kubada Koloyga Mudug Cabdiqni Carabey ayaa baaq u diraay bahda kubada baasketka in ay tageero dhinacwalba leh u fidiyaan si dhalinyarada loogu weeciyo dhinaca Isboortiga, ayadoo laga badbadinayo kooxaha halganka siyaasadeed ku halaaga dhaliyarada
Maamulaha Cumar Samatar Macalin Siciid oo isna kalmado ka jeediyaay goobta ayaa tilmaamay inuu aad ugu farxsanyahay in garoonka Cumar Samatar laga bilaabo tababarka kubada Koloyga oo ay ka faa’ideysanayaan dhaliyarada iskuulada.
Waxa kalo meesha ka hadlay maamulada kale iskuulada iyo macalimiinta iskuulada, kuwaas dhamaantood si weyn u soo dhaweeyay tababarka arday lagu barayo kubada Koloyga, taas oo ay ku tilmaameen aad u wanaagsan, isla markaana codsaday in ay noqdna joogta, si loo helo arday aqoon iyo xirfad u leh kubada baasketka.